पारस ! तिमी कप्तान भएकै सुहाउँछ | NepalDut
असाेज २८ गते २०७६
केशव जोशी .
प्रिय पारस !
आईसीसीले क्यान निलम्बन फुकुवा गरेको २४ घण्टा नबित्दै तिमीले राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिएको खबरले म स्तब्ध भएँ । ममात्र होइन, नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने हरेक समर्थक दुःखी भए । नेपाली क्रिकेट र पारस अनि पारस र नेपाली क्रिकेट एकअर्काको पर्याय जस्तै बनेको छ ।
तिमी नायक थियौ त्यही क्रिकेटको । अभाव, पीडा र दुःखको नियतिका बीच बेलाबेला हुने क्रिकेटले मजस्ता युवा उत्साहित हुन्थ्यौं । खै किन हो पारस, तिमी राष्ट्रको जर्सी लगाएर मैदान प्रवेश गर्दा मेरो मनमा बेग्लै अनुभूति हुन्थ्यो ।
लाग्थ्यो, पारस भए जेपनि सम्भव छ । नेपाली क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यान नै नभएको बेला तिमीले पूरै टिमलाई एक बनायौ । खेलिरह्यौ अभावका बीच, झेलिरह्यौ चुनौतीहरु । तर तिमी डगमगाएनौ । आफ्नो बल र ब्याटले जसले पनि प्रदर्शन गर्ला, त्योभन्दा ठूलो थियो तिम्रो नेतृत्व ।
युट्युबमा नेपालको खेल कहाँ लाइभ आउँछ भनेर खोजिन्थ्यो । त्योभन्दा बढी चासो हुन्थ्यो, तिमीमा । पारसले आज के गर्लान् ? तिम्रो ब्याटिङ बिग्रिए, बलिङमा चमत्कार होला नि भन्ने लाग्थ्यो । यो भरोसा तिमीले दिलाएका थियौ ।
हुन त आफू पछाडि सरेर अरुलाई नेतृत्वको अवसर दिने हिम्मत र फराकिलो छाती कमैको हुन्छ । तर बेला भइसकेको थिएन, अझै तिम्रो हात सामातेर अगाडि बढ्न चाहन्छ नेपाली क्रिकेट । त्यसैले आफ्नो अप्रिय निर्णय फिर्ता लेऊ । मैदानमा कप्तान बनेर फेरि आऊ ।